Aya mabasa manomwe achataura nekuuya kweIOS 11 | IPhone nhau
Izvi zvinomwe maficha achataura nekuuya kweIOS 11
Iyo nyowani yekushandisa sisitimu yekambani yeCupertino, iOS 11, iri kutora nhau dzedu, uye hazvigone kuve zvishoma. Izvo zviri pachena ndezvekuti gomo rese raisazove oregano kune ino yakamirirwa kwenguva refu kuvhurwa. Tiri kuyedza mabetas pasina mutinhimira kana chikonzero, kuti pasave nechero dudziro inokupukunyuka, tinoda kuti uve wakagadzirira sezvatiri kugadzirisa iyi vhezheni itsva yeApple's mobile operating system.
Sezvo makuru maficha maficha anosvika senge skrini yekurekodha kana iyo nyowani skrini yekunyora system, Kune zvekare mamwe mashandiro ayo vashandisi vazhinji vajaira, aya ndiwo akakosha.
Kana neimwe mukana wanga warasikirwa iwe pachako pakati penyaya zhinji dzezvinouya uye zvinotisiya muIOS 11, ndichaenda kupfupisa zvinomwe zvinoshanda zvinosiya iOS 11 nenzira inoshanda kwazvo, ngatiendei ikoko.
1 Hapanazve kusangana ne Twitter ne Facebook
2 Iyo 32-bit nguva iri kumashure kwedu
3 ICloud Drive app inova maFaira
4 Iyo yechipiri tebhu yeControl Center yabviswa
5 Hapana chiratidzo chekudzivirira pane iyo iPad
6 Iwe haugone kuvhura multitasking neiyo 3D Kubata basa
7 Zvimwe zvinhu zvitsva zveIOS 11
Hapanazve kusangana ne Twitter ne Facebook
Sevashandisi vazhinji vanoziva, Facebook neTwitter vane yavo yega chikamu muchikamu chegadziriro yeIOS. Kuisa maakaundi edu evashandisi muchikamu chegadziriro kunotibvumidza kugovana uye kuita zvinhu zvakawanda zvinowirirana, muenzaniso ndeyekugona kuwedzera otomatiki mazita chaiwo uye maakaunzi epaFacebook kune yedu yekunyora mazita, dzimwe nguva kunyangwe iyo pikicha inoenderana kana tikazviita nemazvo. Zvisinei, ndiyo kuwiriranisa Tiine karenda basa rayo chairo, tichave tichiziva mazuva ekuberekwa uye zviitiko zvatakazvipira kuenda. Wonekana nechikamu ichi muIOS 11, Apple inozvibvisa pachayo kubva paFacebook neTwitter, kunyange hazvo maakaunti uye mapassword chikamu chevanopa seGoogle kana Microsoft ichiripo.
Iyo 32-bit nguva iri kumashure kwedu
Apple yanga ichirwira kunatsiridza sisitimu yekushandisa kwenguva yakati rebei, uye zvizhinji zveizvi zviri kune vanogadzira. Muna 2013 Apple yakagadzira zvine simba nekutiratidza nehurongwa hwekushandisa uye processor yakamhanya pa64bits, izvi zvakavhura mikana yakawanda kune vashandisi uye vanogadzira. Nekudaro, hapana vashoma vane husimbe vanosarudza kusagadzirisa maitiro avo, vachivasiya vari pachena kune makumi matatu nemaviri, zvichitadzisa kushanda kwese kwehurongwa hwekushanda. Hazvina futi, kubvira 32bit maapplication haashande pane iOS 11.
ICloud Drive app inova maFaira
Apple yakagadzira maneja wefaira kuti itonge ivo vese. Chimwe chinhu icho vashandisi vazhinji vanga vachida kwemakore, sezvo vazhinji vanga vasina kunyatsogadzikana nenzira iyo iCloud Drive inoshanda, kunyanya pamashandisirwo ehurongwa kunze kwenzvimbo yaApple. Iyo Files application ichave inoenderana neakanyanya masevhisi masevhisi uye network chengetedzo, zvisinei nekuti muIOS 11 Beta 1 hatina kukwanisa kuita kuti ishande neinopfuura iCloud.
Iyo yechipiri tebhu yeControl Center yabviswa
Imwe yesarudzo dzakakakavadzana zvikuru mukambani yeCupertino yaive yekuwedzera yechipiri tebhu kuControl Center, uko kwatichava ne "Iyezvino Kutamba", iyo huru multimedia control tab. Iko kushomeka kwekushandisa kwaive nako, ikozvino iri tebhu rinenge riine mabhatani makuru mune yakajairwa tebhu reControl Center uye isu tinokwanisa kuona kumeso uye mamwe ese mabasa chete nekutsikirira nekuita iyo 3D Kubata basa.
Hapana chiratidzo chekudzivirira pane iyo iPad
Iyo iPad yaive nezvimwe zvekudzivirira kwekutitendera izvo zvaitibvumidza isu kuita zviito senge kuvhura iyo switch switch yekushandisa mukuita kwakawanda. Sara mushe, ikozvino hatizokwanise kushandisa zvimiro izvi nezvigunwe zvitatu kana zvishanu, zvese zvichaiswa pasi pehunyanzvi hweiyo Dock nyowani uye iyo Center Center iyo Apple yanga ichidada kuunza neIOS 11. Chokwadi ndechekuti aya mapfupi akaiswa pane iyo keyboard, asi mune yapfuura Apple Podcast ye iPhone News Isu. akataura kwenguva refu nezve kurasikirwa kukuru uku.
Iwe haugone kuvhura multitasking neiyo 3D Kubata basa
Sezvo iwe uchinyatso kuziva, kana iwe ukatsimbirira nesimba kuruboshwe rwechidzitiro che iPhone ine 3D Kubata kugona, iyo switch switch ichavhura. Kumwe kushanda kunoenda hakuzombodzoka. Dai wango panguva yekutanga beta yeIOS 11 hatina kukwanisa kuita iyi nzira pfupi, uye zvinonyadzisa chaiko. Kunyange chiri chokwadi kuti mamodheru asina bhatani repanyama haazokanganisike zvakanyanya, paiyo iPhone 6s ine bhatani remuchina inogona kutambudza kune avo vaishandiswa kushandisa iyi nzira pfupi (seni).
Zvimwe zvinhu zvitsva zveIOS 11
Hatisi kuzokwanisa kuona zita riri pasi pechiratidzo chemashandisirwo aripo muDock
Isu tinoonekana poindi yekuvhara system, dzokera kumabhawa echinyakare ayo anoratidza kusimba kubva pasi kusvika pane zvimwe.
El nzira pfupi yekumhanyisa kugonesa kana kudzima AirDrop muDirect Center Izvo zvachinja zvachose, hazvikurumidze zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Izvi zvinomwe maficha achataura nekuuya kweIOS 11
Chinhu chega chandichapotsa kuve multitasking neiyo 3D kubata, kune rumwe rutivi, ini ndinogona kudzora multitasking nemasaini pane yangu 9.7-inch iPad Pro ...
Chinhu chekutanga pane yangu iPad Air 1 kana ndikakwanisa kushandisa zvimiro zvematinji matatu ne mashanu, uye ini ndiri mubeta 3 reIOS 5
Yechipiri isu takatarisana neBeta uye zvakajairwa kuna Jaén ndiyo yekutanga, vanogona kunge vakaibvisa kana kuiviga, asi zvinogona kunge zvichizodzoserwa kumashure, kunyangwe pachezvangu pachangu vangangoita vanhu vese vandinoziva uye vandisingazive hapana zano reiyo XD
Asi ini handipotse zvese zvawataura, nekuti ini ndinoda mimhanzi iri munzvimbo yekudzora zvirinani seizvi, zvese mune imwechete
Ndine i6 uye neAir 1 ine iOS 11 uye ndinoda iyi nyowani yekushandisa system
Adrian M akadaro
Ini ndinowedzera chimwe chinhu chakatsakatika muIOS 11 uye chandaishandisa zvakanyanya. Kupeta kaviri bhatani repamba kunodzikisa chidzitiro nepakati kuti ugone kusvika nyore mabhatani ari kumusoro. MuIOS 10 kana uchigadzirisa mashandiro ekugona kuita izvi zvaive zvichikwanisika kudzikisa nzvimbo yekuzivisa kubva pakati pekona, ikozvino neIOS 11 hazvichakwanisika. Nzira chete yekurodha nzvimbo yekuzivisa ndeyekubva pabar yekumusoro pamusoro pechiso.
Pindura kuna Adrian M
Samsung ine 80 mamirioni eOLED skrini akagadzirira iyo nyowani iPhone